हाम्रो पुस्तामा नेईएको सदस्यता लिन दौडिन्थ्यौं, अहिले सदस्यता किन लिनु भन्ने पनि सुनिन्छ
नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गर्नु आफैमा नराम्रो होइन तर राजनीतिक पार्टिकै आधारमा जाने कुराले ‘प्रोफेस्नालिजम किल’ गरेको छ ।
ई.नन्द बन्जाडे | माघ १३, २०७७,
हाम्रो पुस्तामा क्याम्पस पढेर सकिने विस्तीकै नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसन (नेईए)को सदस्य लिन दौडेर गैहाल्थ्यौं । हामीलाई कसैले सदस्य लिनुपर्छ भन्नु पर्दैनथ्यो । स्वत स्फुर्त रुपमा हामी त्यहाँ पुग्थ्यौं ।
हामी पञ्चायतको समयमा हुर्केका थियौं । संगठित हुनुपर्छ भन्ने भावना थियो । इन्जिनियरहरुपनि संगठित हुनको लागि इच्छित रहेका थिए । इन्जिनियर्स एशोसिएसनको आकर्षण पनि थियो ।
पछि एशोसिएसनका गतिविधीले इन्जिनियर्सको मन जित्न सकिरहेको छैन । त्यसैले इन्जिनियरिङ परिषद्मा ६० हजार बढी इन्जिनियर दर्ता हुँदा नेईएमा त्यसको आधा मात्रै सदस्यता लिएका छन् ।
आम चुनावमा साडी बाडेर, खसी काटेर , रागो कटेर भोटमाग्ने चलन रहेको छ । त्यो विकृती इन्जिनियर्स एशोसिएसनमा पनि आएको छ ।
सदस्य लिनको लागि उम्मेदवार हुनेले पैसा खर्च गर्नु हाम्रो संस्था भित्रको ठुलो विकृती हो ।
अहिलेको नयाँ पुस्ताले नेईएमाा राजनीति गर्नको लागि किन सदस्यता लिनु भन्ने गरेको सुनिन्छ । हामी राजनीति गर्न चाहादैनौं भने नेईएमा किन आवद्ध हुने भन्ने भावनाको विकास हुँदै गएको छ । समग्र राजनीतिप्रति एकदमै विमुख भएको नयाँ पुस्ता नेईएमा आवद्ध हुन चाहेको छैन ।
अर्को अहिलेको धेरै युवा विदेश गएका छन् । उनीहरु अध्ययन सकिने वित्तिकै इन्जिनियरिङ परिषद्को सदस्य लिन्छन् तर एशोसिएसनको सदस्य लिदैनन् । १० हजारभन्दा बढी इन्जिनियर सदस्यता नलिई जाने भैसके । नेईएको सदस्यता लिदाँ हामीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने संस्थाले विश्वास दिलाउन सकिरहेको छैन । त्यसैले युवा आकर्षित हुन सकेनन् ।
इन्जिनियर साथीहरु विभिन्न दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनु भएको छ । उहाँले ज्यान गुमाएपछि परिवार विचल्ली पर्ने अवस्थासम्म आएको छ । त्यसैले इन्जिनियहरुको लागि बीमाको कार्यक्रम ल्याएका छौं । तर बीमाको कार्यक्रम ल्याउँदा नविकरण नै नभएका साथी पनि रहेछन् । उनीहरुले रकम पाएनन् यसको जिम्मेवारी नेईएको नेतृत्व हामी सबैले लिनुपर्छ । संस्थाप्रति नै सोचे जस्तो आकर्षित गर्न सकेनौं ।
सदस्य लिनको लागि उम्मेदवार हुनेले पैसा खर्च गर्नु हाम्रो संस्था भित्रको ठुलो विकृती हो । जसले सदस्य बनाउँछ वा नविकरण गरिदिन्छ उसैलाई भोट दिन्छु भन्नु ‘इन्डाइरेक्टली’ खरिद बिक्री हो । हामी जस्तो बौद्धिक समुदायमा यस्तो विकृती आउनु समाजको लागि समेत खराब सावित हुने छ ।
बौद्धिक संस्थाको रुपमा रहेको इन्जिनियर्स एशोसिएसनमा पार्टीगत रुपमा चुनाव उठ्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ । स्वतन्त्र रुपमा उठ्नेले जित्न सक्ने अवस्था नरहेको स्विकार गर्नुपर्छ । हाम्रो समाज विद्यालय व्यवस्थापन समिति, बन उपभोक्ता समिति, खानेपानी उपभोक्ता समितिमा पनि राजनीतिक पार्टीको आधारमा चयन हुने अवस्था रहेको छ । जुन खराब संस्कारको रुपमा विकासित भैरहेको छ । नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गर्नु आफैमा नराम्रो होइन तर राजनीतिक पार्टिकै आधारमा जाने कुराले ‘प्रोफेस्नालिजम किल’ गरेको छ ।
इन्जिनियरहरुले के बुझ्नुपर्दछ भने संस्था हाम्रै लागि चाहिन्छ । अप्ठारो पर्दा संगठनिक रुपमा आवज बाहिर आएन भने माग कसैले नसुन्न सक्छ । सबैले आफ्नो संस्था हो भनी कर्म गरौं ।
कुनैपनि काम टिममा एफर्ड गर्नु र एक्ला एक्लै गर्नुमा पनि फरक रहेको छ । संगठनमा एक्लै चुनिएर गएर हुँदैन । कुनै एकजना व्यक्ति राम्रो जाँदैमा सबै कुरा परिवर्तन भैहाल्छ भन्ने पनि होइन । तर टिम बनाउँदा अति राजनीतिकरण भएको छ ।
इन्जिनियर्स एशोसिएसनमा आवद्धता बढाउनका लागि केहि प्रयास भएका छन् । इन्जिनियरहरुको बीमा र लोन सम्बन्धी व्यवस्था भएको छ । इन्जिनियरलाई आकार्षित गर्नको लागि इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेजको कुरा आएको छ । संसद भंग भएको कारणले रोकिएको छ । ढिलो छिटो पास हुन्छ । इन्जिनियरिङ परिषद् ऐनमा समेत हामीले भुमिका खेलेका छौं । इन्जिनियरहरुलाई फइदा हुने यस्तै काम हामीले गर्दै जानुपर्छ ।
प्यानल मार्फत चुनाव जित्यो अनि सरकारी नियुक्ति वा कुनै आयोजना हात पार्ने नेईएलाई भ¥याङ बनाएको भन्ने पनि आवाज उठ्दै आएको छ । यो कुरा सबै इन्जिनियर साथीहरुले आफै मुल्यांकन गर्ने कुरा हो । सबै मानिस बैमान छन् वा अवसरवादी छन् भनेर हेर्यौ भने पनि राम्रो हुँदैन । कमजोरी स्वीकारगरी अघि बढ्दै जाँदा सुधार हुँदै जान्छ ।
नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसन वाग्मती प्रदेशका सभापति ई.नन्द बन्जाडे संग इन्जिनियर्स नेपालले गरेको कुराकानीको संपादित अंश
सभापति, नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसन वाग्मती प्रदेश
ई.नीरज अधिकारी | जेठ २३, २०७८
इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानलाई खुलापत्र
ई. भक्तबहादुर भण्डारी | जेठ २, २०७८
कोरोना महामारीमा इन्जिनियरको परिचालन
ई. श्रीराम न्यौपाने | कात्तिक १९, २०७७
सुरुङ निर्माणको प्रविधि र नेपाली प्रयोग